Umqondo Wokuhlala Wamakhamera Omzimba Ozungeziwe | Izixazululo ze-OMG
Umqondo Wokuhlala Wamakhamera Womzimba Worn
Umbono womphakathi ngekhamera egqoke imizimba ubuceliwe ngezikhathi ezithile, abenzeli bomthetho bavele bazame ukuthola ukuthi bacabangani ngale khamera egqoke umzimba. Ngaphandle kokwephula ubumfihlo nezikhathi azivunyelwe ukuthi zibe nokuqoshwa Kuneminye imibono umphakathi onayo ngokujwayelekile mayelana nokusetshenziswa kwala makhamera.
Lapho kutholwa lapho futhi abaphendule okwabuzwa imibuzo nabo bathi bazokweseka ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba. Kube nemibiko yokuthi iningi eliphendulile lathi amakhamera agqoke umzimba azothuthukisa ubufakazi, ukucaca, ikhwalithi yokwelashwa, isimilo samaphoyisa, umthetho osemaphoyiseni, ukuhambisana nokuziphatha kwezakhamuzi nakwezamaphoyisa. Bekuthiwa futhi kuzonciphisa izikhalazo kanye nokukhohlakala obekuyinkinga. Kukholakala nokuthi ukuvezwa komphakathi kwikhamera yomzimba sekuthuthukile hhayi nje ukubonwa kwezakhamizi ngekhamera egqoke umzimba kubandakanya ikhambi lokwelashwa, isimilo samaphoyisa, ukuba semthethweni kwamaphoyisa kanye nenkohliso.
Amakhamera agqoke izidumbu athunyelwe ngamaphoyisa emazweni afana ne-United States, Australia kanye namazwe ase-Europe.
Umphumela wamakhamera agqokwa uMzimba
Ukuzazisa: lokhu kufaka ukuqaphela ukuthi ubukelwe, lokhu kwaziwa nangokuthi Ukuzazisa komuntu ngenhloso. Ukwaziswa kuvame ukwanda lapho umuntu ebona ukuthi ubhekwe. Ukushintshwa kokuziphatha kwenzeka futhi kukhona ukushintshela ekuziphatheni okwamukelekayo emphakathini, ngalokhu kufakazelwa ukuthi noma yini eyenza umuntu agxile ekuziboneni kwabo ngokuvamile ikhulisa ukuzazi. Ikhamera egqokwa ngomzimba ingenye yezindlela eziningi zokwandisa ukuqonda kwabantu nokwenza ukuthi bazi ukuthi izenzo zabo ziyabukwa futhi ziyaqoshwa. Le ndlela yokubenza banciphise ukwenza okungalungile futhi ukona umthetho.
Okutholakele ocwaningweni kukhombisile ukuthi ama-87% ayavuma ukuthi amakhamera agqokwa uMzimba azothuthukisa ukusebenza kwamaphoyisa, nokuthi i-70% nayo iyavuma ukuthi amakhamera azothuthukisa indlela izakhamizi eziziphethe ngayo lapho zihlangana namaphoyisa. Abaphenyi baphinde baphetha ngokuthi labo abanombono omubi ngamaphoyisa empeleni bazoyisekela kakhulu ikhamera egqoke umzimba, ngoba benomuzwa wokuthi ekugcineni izoba yindlela yokuthola ukungathandeki futhi ikwazi ukuveza obala. Kepha kuye kwaba isimanga lapho kubuye kwenzeka icala, izakhamizi ebezithanda amaphoyisa empeleni yilezo ezisekela amakhamera agqoke izidumbu, labo ababona sengathi benza umsebenzi omuhle yilabo abeseka kakhulu. Omunye umphumela ongabonwanga ngaphambili ukuthi lezo zakhamizi ezazikhathazeke kakhulu ngobugebengu ezizungezile zazingathambekele ekuboneni inzuzo eyayilethwa yikhamera egqokwa nguMzimba. Kepha abacwaningi babuye bathi; umuzwa uhlobene nobudlelwano babo obuqondile, nokuthi amaphoyisa aziphatha kanjani izindaba esikhathini esedlule. Konke bekuhambisana nokusebenza kwamaphoyisa, ukwesaba ubugebengu kanye nomqondo wokuthi amaphoyisa awenzi umsebenzi omuhle. Ngakho-ke bayakholelwa ngisho nekhamera yomzimba abasazokwenza kangcono.
E-Palm beach County, kwaxoxwa nabahlali futhi kwenziwa ucwaningo kubo, abahlali balapho bakholelwa ukuthi amakhamera agqokwa empeleni angakhuphula ezokuphepha ezisebenzini nakubahlali ngokufanayo okwenza umphakathi wabo uphephe ukwedlula indlela owawungenayo ikhamera. Abahlali bakholelwa ukuthi ikhamera egqoke umzimba izokwenza lokhu:
Thuthukisa ukusebenza kwezikhulu nabahlali
Khuphula ukuba semthethweni kwamaphoyisa
Thuthukisa ikhwalithi yobufakazi obuqoqiwe
Izakhamizi lapha nazo zikholelwa ukuthi ukusetshenziswa kwale khamera, kuzokwenza kube lula ukuthi isikhulu singayisebenzisela lapho sihlangana nezakhamizi.
Ngenkathi kwenziwa ucwaningo entshonalanga nePalm Beach, izakhamizi zalapho zazinombono ohluke kakhulu mayelana nokuhlangana komphakathi wamaphoyisa, ukusebenza kwamaphoyisa futhi nezinkinga eziphathelene nobugebengu nokuphepha. Izakhamizi lapha zibike ukuthandwa okumbalwa embonweni wazo wokwethembeka nokungakhethi kwamaphoyisa endawo. Bakholelwa ukuthi amaphoyisa awaziphathi kahle izindaba ezibalulekile, lokhu bekubuye kuthiwe yinkinga yedolobha. Kubikwe nokuthi emigwaqweni yabo, amaphoyisa endawo amisa abantu ngaphandle kwesizathu esanele futhi bavame ukusebenzisa amandla lapho kukhonjiswa ukumelana. Kwaphawuleka ukuthi lezi zehlakalo zazivame kakhulu entshonalanga nokuthi kwamenyezelwa amakhamera agqokwa ngomzimba ukulwa nezinkinga ezinjengale.
Kube neziphakamiso eminyakeni edlule yokuthi isizathu sokuthi kube nokwehliswa kwezikhalazo ngokumelene nombutho wamaphoyisa kubangelwe kakhulu ngenxa yamakhamera agqoke umzimba. Kuthiwa kukhiqizwa okuvame ukubizwa ngokuthi “yimpucuko”. Kubusa kakhulu lokho okwachazwa ngaphambili ukuthi; lapho abantu bazi ukuthi bayabukwa bavame ukugqoka izimfanelo zabo ezinhle zokuziphatha. Kuyaqapheleka ukuthi ukusungulwa kwamakhamera agqokwa uMzimba kunganciphisa izikhalazo zezakhamizi njengoba izakhamizi ziboshwe ngamacala amancane futhi zingazenzi izikhalazo ezingamanga.
Ukuba semthethweni kwamaphoyisa kungathuthukiswa ngokusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba. "Ukuba semthethweni kwamaphoyisa kuchazwa njengempahla yengqondo yeziphathimandla, isikhungo noma ukuhlelwa komphakathi okuholela kulabo abaxhunyiwe kukholelwa ukuthi kufanelekile, kufanelekile futhi kufanelekile" (uTyler, 1990 p. 375). Kubonwe njengokubaluleke kakhulu njengoba inekhono lokubumba isimo sengqondo nokuziphatha kwezakhamizi. Ngokuhamba kwesikhathi inqwaba yabantu ibonakale ihambisana namaphoyisa, lokhu kungenxa yokuthi abaningi bayazi ukuthi baphethe amathuluzi obuhlakani obuyinkimbinkimbi kakhulu futhi bangagwema ukuba nezinkinga ngobufakazi obuzophakanyiswa buphikisana nabo. Ikhamera egqoke umzimba iphakathi kwamathuluzi amaningi enza izakhamizi zithobele uphenyo nobudlelwano bamaphoyisa.
Abagxeki bakhombe ezahlukene zezinkinga ezinemiphumela eyinkimbinkimbi efaka ubumfihlo bezakhamizi, ukufinyelela kumarekhodi angasese nokuqoshwa kwenani labantu abasengozini ie izingane. Lezi yizinkinga abagxeki abakhombe kuzo njengezingqinamba ezivela ekusetshenzisweni kwamakhamera agqokwa ngomzimba emphakathini. Ngenxa yalokhu abenzeli bezomthetho banikeza ukuqeqeshwa okuqinile futhi banemithetho nezinqubomgomo eziphathelene nokusetshenziswa kwamakhamera ukugwema ukungena ezinkingeni ngenkathi bezama ukuxazulula eyodwa
Umqondo Wokuhlala Wamakhamera Womzimba Worn igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3535 Ukubuka kwe-1 Namuhla